အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ရောဂါလက္ခဏာများ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပြ,နာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာများကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားကြီးမားသောစကေးဖြင့်လေ့လာခြင်း၊ လက်တွေ့မကျသည့်နမူနာ (၂၀၁၀၉) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့်ဆံပင်အပေါ်တွင်။
အရွယ်ရောက် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများအသင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး, Hypersexuality နှင့် Largescale Non-လက်တွေ့နမူနာ (2019) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများထဲတွင်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း
J ကိုလိင် Med ။ 2019 မတ်လ6။ pii: S1743-6095 (19) 30324-8 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2019.01.312 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
နှစ်ဦးစလုံး B ကို1, Koós M က2, Tóth-Királyငါ3, Orosz, G4, Demetrovics Z ကို2.
အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) hypersexuality အတွက်အများဆုံးပျံ့နှံ့ comorbid မမှန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများသာကုသမှုရှာကြံလူတို့တွင် ADHD နဲ့ hypersexuality ၏အသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PPU) hypersexuality ၏အများဆုံးမကြာခဏပေါ်ထွန်းခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်းတည်းသော်လည်း, အဘယ်သူမျှမကယခင်သုတေသန ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
(ဈ) မှ hypersexuality နှင့် PPU စပ်လျဉ်း ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေဆနျးစစျနှငျ့ (ii) နှစ်ဦးစလုံး၎င်းတို့စပ်ကြားကြီးမားသော non-လက်တွေ့နမူနာအတွက် hypersexuality နှင့် PPU နှင့်အတူဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။
multi-အုပ်စုကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေတို့တွင်တွေးဆအသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကောက်ယူခဲ့ hypersexuality နှင့် PPU အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား (N ကို = 14,043 သင်တန်းသားများ; အမျိုးသမီးတွေ = 4,237; အသက်အရွယ် = 33.5 နှစ်ပေါင်းဆိုလို, SD က 10.9 =) ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေ Self-အစီရင်ခံအစီအမံကနေတဆင့် hypersexuality နှင့် PPU စပ်လျဉ်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များအရ hypersexuality သည်အမျိုးသမီးများအကြားပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း (r  = .50, P <.01) နှင့်အမျိုးသားများကြားအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်ခိုင်မာသည့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် (r  = .70, P <.01) ။ ADHD ရောဂါလက္ခဏာများသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးတွင် hypersexuality နှင့်အတူအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း (β = .50, P <.01; β = .43; P <.01; အသီးသီး)) ။ အမျိုးသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ADHD ၏လက္ခဏာများသည် PPU (β = .45, P <.01) နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း ADHD ၏လက္ခဏာများမှာ PPU နှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအားနည်းသော်လည်း (β = .26, P) <.01) ။
ယောက်ျား hypersexuality သို့မဟုတ် PPU ၏မြင့်မားရှိတဲ့အခါ, ADHD အလားအလာ comorbid ရောဂါအဖြစ်အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ ပတျသကျ. ADHD သာ hypersexuality ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလားအလာ comorbid ရောဂါအဖြစ်အကဲဖြတ်ရပါမည်။
လျှောက်ထားခြင်း Self-အစီရင်ခံစာနည်းလမ်းများပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှဘက်လိုက်မှုရှိသည်။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုကြီးတစ်ခုအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအပေါ်ကောက်ယူနှင့်စာပေအတွက်ဖြေရှင်းဖူးကြောင်းအမျိုးသားများတွင်ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်သာ hypersexuality နှင့် PPU အတွက် ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေများ၏မတူညီအခန်းကဏ္ဍ, လေ့လာခဲ့သည်။
ADHD လက္ခဏာများသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံး၏လိင်ပြင်းထန်မှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်ပြီး ADHD လက္ခဏာများသည်အမျိုးသားများကြား PPU တွင်ပိုမိုအားကောင်းသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရ PPU သည် hypersexuality အမျိုးအစားခွဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းယခင်ရလဒ်များကိုအတည်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ခံအကြောင်းအရင်းများကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားသီးခြားစီစစ်ဆေးသင့်သည်။ Bőthe B, Koós M, Tóth-Király I, et al ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အလွန်အကျွံလိင်မှုကိစ္စနှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားပြProbleနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလေ့လာခြင်း၊ လက်တွေ့မဟုတ်သောနမူနာတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။
KEYWORDS: ADHD ရောဂါလက္ခဏာများ; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ကျားကွာခြားချက်များ; Hypersexuality; ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း